Hardware စာအုပ်များ - Page2- မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
ပြန်စာ - All In One A+ Certification Exam Guide
No9file can't download ...some of server program
အပိုင်း ၉ --> http://ifile.it/s2w8htj
Last edited by tu tu; 12-12-2008 at 07:47 PM.. Reason: Quote ပြင်ရန်
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ zawnaingxxx အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ပြန်စာ - Hardware စာအုပ်များ
Aung Aung, zo
ကို သုသုရော အားလုံးကို ကျေးဇူးပါပဲ။
ကျွန်တော်က အခုမှ တွေ့လို့ အခုမှ ကျေးဇူးတင်ရတယ်ဗျို့
ကျွန်တော်က eng အရမ်းတော်တော့ အခုလို eng language နဲ့တွေ့တော့ နဲနဲ အကြပ်ရိုက်တယ်။
ဖြစ်နိုင်ရင် မြန်မာဘာသာလေး ရှိရင် share လုပ်ပါအုံး။
very thanks မှာပါ။
ကျွန်တော်က ifile မှာပဲ ဒေါင်းလို့ရလို့။ ကျန်တာတွေ ဒေါင်းလို့ရအောင် ကူညီပေးပါအုံး။
သြော် .. ကျွန်တော် မြန်မာမိသားစုဂျာနယ်(၁/၂) ဒေါင်းပြီးပါပြီ။
၂ ခုလုံးကို reader နဲ့ ဖွင့်တာ demage ပြနေလို့
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ကျော်ခန့်ဇော် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
အဲ့ဒီလင့်ခ်မှာ မြန်မာလို ဆွေးနွေးထားတာတွေရော မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေရော ရှိပါတယ်။
ifile လင့်ခ်မဟုတ်တာတွေ ပြန်တင်ပေးပြီးပါပြီ။
မြန်မာမိသားစုဂျာနယ်က ဘယ်လို damage ဖြစ်တာလဲ။
ဒေါင်းတုန်းက file size မပြည့်လို့များလား။
Last edited by tu tu; 03-01-2009 at 11:14 AM..
ပြီးမှ ပြန်ဖြေပြီး ဖွင့်တော့ demage ဖြစ်တာပဲ။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ကျော်ခန့်ဇော် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဒေါင်းထားတဲ့ဖိုင်က ပေးထားတဲ့ file size နဲ့တူရဲ့ကြည့်လိုက်လေ။
မတူရင် size မပြည့်လို့ပေါ့။ ပြန်ဒေါင်းကြည့်လိုက်။
connection မကောင်းတဲ့သူတွေအတွက် ဖိုင် size သေးအောင်ခွဲပြီးတင်ထားပေးတာလည်း ရှိပါတယ်။
အတိုင်းထက်အလွန်ပါဘဲ.......ဗျာ။။။။။။။။။။။။----------အရမ်းသဘောကျတယ်.......ကျနော်မှာလဲရှိခဲရင် ချန်မထားဘဲ တင်ပေးပါ့မယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ငြိမ်းဦးဆွေ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ငြိမ်းဦးဆွေ
ပြန်စာ - Repairing and Upgrading your PC
တစ်ခုမှ ဒေါင်းလို့မရပါ ...........................................................................................................................................
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ mgseesar အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
တယ်ကြီး, ကျော်ယံ, zo
13-08-2009, 12:11 AM
အောက်ပါအသင်းဝင် 12 ဦးတို့မှ tu tu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဆန်းမောင်, တယ်ကြီး, ရန်မျိုးအောင်, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, နေလှိုင်း, အောင်ကျော်ဆန်း, ဖြိုးယံလေး, Aung Aung, chitnyimalay, hellboy, theinzaw5949, zo
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ mr.vampire အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
22-07-2010, 10:43 PM
Laptop Repair Video Training
Do you want to learn how to fix laptops?Are you afraid to work on laptops for fear of breaking them?Do you want to expand your skill set so you can make big money fixing laptops instead of sending the business away? Receive the same high level of Podnutz quality, as Steve releases the long awaited Laptop Repair Video Collection 1st !
4.Checking DC Jack on HPDV5
5.How To TakeaLaptop Apart
6.HPDV8000 Spilled Iced Tea Keys Not Working
9.Power Adapter Fix Gateway Laptop
မူရင်းဆိုဒ်က Podnutz ကဖြစ်ပါတယ်..အဲဒီကသူတွေဘဲရှင်းပြထားဒါလို့ထင်ပါတယ်..
ဖိုင်ဆိုဒ် နည်းနည်းများဒါမို့လို့ ကျနော်တရက်ကိုယ်တမျိုးလောက်စီခွဲပြီး တင်ပေးသွားပါမယ်..လိုက်ကြည့်ပြီး
စမ်းကြည့်ချင်တဲ့သူရှိလဲ စမ်းကြည့်ကြပေါ့ဗျာ...Video resolution ကလဲသိပ်ကိုယ်ကောင်းမွန်ပါတယ်...
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်သာ ဒေါင်းလုပ်ချပြီး ကြည့်ကြည့်ဗျာ..အကြိုက်တွေ့လိမ့်မယ်...ဒီနေ့တော့ Introduction
နှင့် Batteries ကိုယ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...ကျနော် ဒီမှာ Video များတင်ပေးပြီးသွားရင် နောက်တခါ
800+ Laptop repair manuals - Service guide DVD ကိုယ်လဲတင်ပေးသွားအုံးမှာ..ကျနော်တို့ဖိုရမ်မှာ
ကိုမုန်းလေး ဆွေးနွေးထားတဲ့ Laptop Hardware များဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးချက်များ။ ဆိုတဲ့ပို့စ်လည်း သိပ်ကောင်း
ပါတယ်..သူကလက်တွေ့ဖွင့်ပြထားဒါပါ.. ကျနော်တို့ ခု ဗီဒီယိုဖိုင်မှာလည်း လက်ပ်တော့အတော်များများအတွက်
HJ နှင့်ခွဲထားလို့ HJ နှင့်ပြန်ဆက်ပေးပါ.. ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာ Jetaudio player နှင့်ကြည့်ပါ...
အောက်ပါအသင်းဝင် 13 ဦးတို့မှ kyaukphyu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ဆန်းမောင်, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, မောင်ပေါ်ဦး, မြင့်မိုရ်, bonge, hellboy, KznT, phoetharlay, saiwaihin, tu tu, yawnathan, zo
23-07-2010, 06:56 PM
ကျနော်ဒီနေ့ နံပါတ်3နှင့်4ကိုယ်တင်ပေးထားပါတယ်..တပြိုင်တည်းအကုန်တင်ပေးချင်ဒါပါ..ဒါပေမဲ့လို့
File size7GB ကြီးတောင်ဆိုတော့မလွယ်ကူလို့ပါဗျာ..သိမ်းထားချင်သူများ တကယ်လိုအပ်သူများ လိုက်
လုပ်ကြည့်ချင်သူများက ဖြည်းဖြည်းချင်းဒေါင်းယူကြပေါ့ဗျာ...ဒေါင်းဘဲဒေါင်းပြီးတော့ နိုင်သလောက် မှတ်
မိသလောက် လက်လှမ်းမှီသလောက်ကြည့်ဖိုး လိုက်လုပ်ကြဖိုးလည်းမမေ့ပါနှင့်အုံး..ဒေါင်းကြီးဘဲဒေါင်းထား
တယ် စက်ထဲမှာ ဘာမှ အသုံးမဝင်သလိုကြီးဖြစ်နေပါအုံးမယ်...
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ kyaukphyu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဆန်းမောင်, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, မောင်ပေါ်ဦး, မြင့်မိုရ်, hellboy, saiwaihin, tu tu, yawnathan, zo
ကျနော် ဒီနေ့ တစ်ခုထပ်ပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ.HowToTakeaLaptopApart ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ..
ဖိုင်ဆိုဒ်နည်းနည်းများဒါမို့လို့ 200 MB စီပိုင်းပြီး တင်ပေးထားပါတယ်...
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ kyaukphyu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဆန်းမောင်, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, မောင်ပေါ်ဦး, hellboy, saiwaihin, yawnathan, zo
ကိုမြင့်မိုရ်နှင့် ကိုဆန်းမောင်တို့ ပူဆာဒါများလို့ ကျနော်ထပ်တင်ပေးထားတယ်ဗျို့..ဒေါင်းပြီး ကြည့်လိုက်ကြပါအုံး
hardware သမားများအတွက်လည်း အိုကေပါတယ်..ဒီနေ့မှာတော့ မားသားဘုတ် အစားထိုးဒါနှင့် မားသားဘုတ်
ပြင်ဆင်ဒါ နှစ်ခုကိုယ် တင်ပေးထားပါတယ်ဗျာ..
Hj နှင့် ပြန်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာ..
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ kyaukphyu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဆန်းမောင်, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, မောင်ပေါ်ဦး, bonge, hellboy, KznT, saiwaihin, tu tu, yawnathan, zo
17-08-2010, 06:26 PM
တနေ့တခါ ပေါ်လို့လာ ဇာတ်ကားရှည်ကြီးတွေ ပြနေဒါလားလို့မထင်ကြပါနှင့်ခင်ဗျာ.. မိမိတင်ချင်တဲ့ အလေး
အပင် data များကိုယ် free hosting server ပေါ်တင်ရဒါ တင်ဖူးသူများဘဲသိကြပါလိမ့်မယ်..အားလုံးအဆင်ပြေ
အောင်လို့ တရက်ကိုယ် နိုင်သလောက်စီသွားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်..
ဒီနေ့မှာတော့ ကီးဘုတ်က ကီးများပျက်ခဲ့ရင် ပြင်ဆယ်ဖိုးရာ ဝယ် ကျနော်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..ခုတောင်
MB 890 လောက်ရှိပါတယ်..ဖြည်းဖြည်းချင်း စာဖတ်ရင်း လုပ်စရာရှိသည်များကိုယ်လုပ်ရင်းကိုင်ရင်း အေးဆေး
ဒေါင်းထားကြပေါ့ဗျာ.. ဒေါင်းပြီးသွားရင် ကြည့်ဖိုး စက်အစုတ်လေးရှာပြီး ဂလိကြည့်ဖိုး အခွင့်အရေးကြုံရင်
ကြုံသလို လိုက်လုပ်ပေးကြပါအုံး..ဒီအပိုင်းပြီးရင် နောက်နှစ်ပိုင်းဆိုရင် Collection 1 ပြီးဆုံးပါမယ်...
ဆန်းမောင်, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, မောင်ပေါ်ဦး, hellboy, saiwaihin, Ye Aung, zo
ဒီနေ့မှာတော့ laptop တလုံးမှာ power သွင်းတဲ့အပေါက်လေးက လောင်သွားပြီး power သွင်းမရချိန်မှာ မိမိဘာ သာ ဖြုတ်တပ်ပြီး ခဲလေးဆော်ပေးရဒါ..ကြိုးကလေးနှင့် ပြန်ပြီး ခဲဆော်ဒါလေးကိုယ် လွယ်လင့်တကူ လုပ်ပြထားဒါ ကို မိသားစုဝင်များ မိမိဘာသာပြင်ဆင်မူပြုတတ်အောင်လို့ လာပါပြီခင်ဗျာ..Powerjak ပြန်လည် ပြင်ဆင်ဒါပေါ့ဗျာ.
နောက်တပိုင်းမှာ PowerAdapterFix လုပ်တဲ့အပိုင်းတပိုင်းပြီးရင် Collection 1 ပြီးဆုံးပါမယ်.. မိသားစုဝင်များ အ မြင်နှင့်ကြည့်ပြီးရင် လိုက်ပြီးလုပ်ကြည့်ဖိုးလည်းမမေ့ကြပါနှင့်..
ဆန်းမောင်, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, မောင်ပေါ်ဦး, hellboy, saiwaihin, zo
ပြန်စာ - BuildingaPerfect PC
ပြည့်စုံကောင်းမွန်သော ကွန်ပျုတာတစ်လုံး ရရှိအောင်
ဘယ်လို တည်ဆောက်မလဲ ဆိုတာ လေ့လာနိုင်ပါတယ် ...
အခန်းပေါင်း ၈ ခန်း စာမျက်နှာ ၃၅၂ မျက်နှာပါတဲ့ chm ဖိုင်ပါ..
download details, bppcse.rar, 17.96 mb
အမ တူးတူး နဲ့ အကို အမ တို့ရေ ဒီလင့်လေးကို ပြန်တင်ပေးပါဦး
လင့် က သေနေပီ မလို့ပါ
ကျတော်ကလိချင်လိုပါ
သန့်ဇင်ဌေး, မြင့်မိုရ်, minthike, zo
အစ်ကိုရေ link ကသေနေပြီ ပြန် upload တင်ပေးဦးနော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပြန်တင်ပေးမယ်လို့လည်းမျော်လင့်ပါတယ်။ဒိထက်ပိုပြီး အများအကျိုးသယ်ပိုးနိုင်ပါစေ။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ sanwin89 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by sanwin89
MakeUseOf - Your PC Inside And Out
MakeUseOf က guide books တွေထဲက ဒီ စာအုပ်လေးကို သဘောကျမိတယ်။ MakeUseOf ရဲ. ထုံးစံအတိုင်း အလွယ်တကူ နားလည်အောင် ရှင်းပြထားတယ်။ ရောင် စုံ ပုံလေးတွေနဲ. အမြင် လဲ လှတယ်။ ဖတ် ရမှာလဲ နည်းနည်းလေးနဲ. ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် ရှိတယ်။ ကိုယ်. PC မှာ ဘာတွေရှိလဲ သိထားရင် ကောင်းတာမို. လူတိုင်းဖတ်သင်.တယ်ထင် ပါတယ်။
Download Link: http://ifile.it/pht19f0
File Size - 5.16 MB
ကိုးကား - www.makeuseof.com
Last edited by g00gle; 23-03-2011 at 01:33 AM..
စစ်တွေသားချေ, နေမင်းမောင်, မောင်ပေါ်ဦး, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, bonge, KznT, minthike, zo
26-01-2011, 07:37 AM
အစ်ကိုရေ.. လင့်က သေနေပြီလားမသိဘူး ဆွဲလို့မရဘူးဗျာ. တစ်ခြားလင့်ကနေ ပြန်တင်ပေးလားနော်..
ပြန်စာ - Hardware စာအုပ်များ (MakeUseOf - Your PC Inside And Out)
' ကကြီး' ရေးဖို့ မှောက်လျက်အိပ်နေသူ
ကိုg00gleရဲ့ စာအုပ်လေးကို ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...............။
ထင်မြင်ချက်များ ဆွေးနွေးခြင်းများ ကြိူဆိုပါတယ် ခင်ဗျာ……………
လူတွေရဲ.အတတ်အသိပညာ ဆိုတာတကယ်တော့ အာရုံ သိလေး သက်သက်မျှသာ ဖြစ်ပြီး၊ အတွေးအခေါ်ပညာတွေအပေါ် မာန်မာန၊မစ္ဆရိယ စေတသိတ်တွေနဲ. တန်ဆာဆင်လိုက်ရင်တော့ သတိတရားကင်းမဲ့တဲ့ အပြုအမူ၊ တကဲ့စစ်မှန်သောတတ် သိပညာရှင်တို.ရဲ.အမူအကျင့်နဲ.ဆန်.ကျင် ပြီးသားလို.မှတ်ယူမိပါတယ်။
Last edited by နေမင်းမောင်; 26-01-2011 at 11:25 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ နေမင်းမောင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
သန့်ဇင်ဌေး, bonge, zo
ပြန်စာ - Computer Hardware Fundamental (မာတိကာ)
A+ Hardware ကို အင်္ဂလိပ်လို လေ့လာချင်သူများအတွက် 2010 ကမှထွက်ထားတဲ့စာအုပ် ကိုအောက်မှာ ဒေါင်းပြီးတော့ လေ့လာနိုင်ပါတယ်...pdf ဖိုင်ဆိုဒ်က 36MB ခန့် ရှိပါတယ်..
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ ကိုစံငြိမ်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ချစ်သမီး, လမ်းပြကြယ်, ဝင်းအောင်, သန့်ဇင်ဌေး, နေမင်းမောင်, bonge, KznT, tu tu, zo
15-03-2011, 05:18 AM
MakeUseOf ရဲ့ Guide books တွေကို ကို google လည်း အပေါ်မှာ တင်ပေးဖူးတယ် - တော်တော်များများ ကောင်းမှန်း သတိမထားမိကြဘူး - အင်္ဂလိပ်လို တွေ့ရင် တော်တော်များများက ဟင်ကနဲ လှည့်ထွက်သွား ကြတာများတယ် - အကြံပြုပါရစေ - အဲ့လို မလုပ်ကြပါနဲ့ - စမ်းဖတ်ကြည့်ကြပါ - MakeUseOf ရဲ့ Guide books တွေထဲက အရေးအသားတွေဟာ တော်တော်လေးကို ပျော့ပျော့ပျောင်းပျောင်း ရှိပါတယ် - ဖတ်ရလည်း လွယ်ပါတယ် - စာရေးသူတွေ အဓိကကျတဲ့ အချက်တွေကိုပဲ စာဖတ်သူ နားလည်လွယ်အောင် ကြိုးစားပြီး ရေးထားကြပါတယ်။ စာအုပ်တွေက အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ စာအုပ်တွေပါ - တကယ်ကို အကျိုးရှိတဲ့ စာအုပ်လေးတွေပါ - နင်ပတ်ကစ အထူကြီးတွေလည်း မဟုတ်ဘူး - တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ဖတ်ဖို့ အဆင်ပြေယုံလောက်လေးတွေ ရေးထားကြတော့ ဖတ်ရတာလည်း ပျင်းဖို့ မကောင်းဘူး - အနှစ်သာရတွေလည်း ပါတော့ ဖတ်နိုင်လေ အကျိုးရှိလေ ဆိုတာပြောဖို့တောင် လိုမယ် မထင်တော့ဘူး - ပိုပြောနေတယ် ထင်ရင် ခုပဲ ဒေါင်းလုပ်ချပြီး တစ်အုပ်လောက် စမ်းမြည်းကြည့်လိုက်ပါ။ ( တစ်ချို့ Guide books လေးတွေက MUO က မဟုတ်ပါဘူး - ကျွန်တော့်ဘာသာ ရှာပြီး စုထားတာလေးတွေပါ။ )
အောက်မှာ ဖော်ပြထားမယ့် Uploading sites တွေကတင် မဟုတ်ပဲ - http://www.makeuseof.com/pages/ မှာပါ Member တစ်ယောက် ဖြစ်ယုံနဲ့ စာအုပ်အားလုံး အလကား ဒေါင်းလုပ်ယူလို့ ရပါတယ်။
အပေါ်က links တွေ အဆင်မပြေရင် ဒီအောက်က links တွေကနေ ယူပါ။
Last edited by KznT; 15-03-2011 at 05:20 AM..
ကိုစံငြိမ်း, ချစ်သမီး, လမ်းပြကြယ်, ဝင်းအောင်, သန့်ဇင်ဌေး, ဇော်ရဲပိုင်, နေမင်းမောင်, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, မြင့်မိုရ်, aungphyo, bagothar85, bonge, kyaukphyu, kyawminkhoung, moe_poung, thetnaung87, tman, tu tu, zo
Building the Perfect PC, 2nd Edition pdf
Last edited by လမ်းပြကြယ်; 17-03-2011 at 02:46 AM..
သန့်ဇင်ဌေး, နေမင်းမောင်, bagothar85, g00gle, zo
်ifile တွေကိုဒေါင်းတာမရပါဘူး တစ်ခုမှကိုဒေါင်းလို့မရတာပါ တစ်ခြားလင့်ခ်လေးတွေ တင်ပေးပါလားနော် ကူညီပါဦးနော်
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ May Thu Aung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
May Thu Aung ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by May Thu Aung
Originally Posted by may thu aung
အစ်မေ၇ ဘယ်ဖိုင်က ဒေါင်းလို့ မ၇တာလဲ ဆိုတာလေး ပြောပေးခဲ့ ပါ.။ ဘယ်စာအုပ် ဆိုတာကိုပြောပေးပါ။ပြန်တင်ပေးပါ့ မယ် .။။။
Last edited by ဝင်းအောင်; 20-03-2011 at 10:19 PM..
သန့်ဇင်ဌေး, နေမင်းမောင်, aungphyo, bagothar85, bonge, zo
http://www.myanmarfamily.org/forum/s...3&postcount=18 ဒီပို့စ်မှာ ကိုရာမညဖိုးလပြည့် တင်ပေးထားတဲ့ All In One A+ Certification Exam Guide ကိုပြောတာလား မသိဘူးနော်။ တကယ်လို့အဲဒါဆိုယင်တော့ ကျွန်တော်ရှာလို့တွေ့သမျှလေးတွေကို အောက်မှာလင့်တွေပေးထားပါတယ်။ ကိုဖိုးလပြည့်တင်ပေးထားတာက 6th edition ပါ။ ကျွန်တော်တွေ့တာတော့ 7th edition ပဲတွေ့လို့ အဲဒါကိုပဲ ညွှန်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ ခေါင်းစဉ်လေးတွေကို ကြည့်ပြီး ကြိုက်နှစ်သက်ရာကို ရွေးဒေါင်းလိုက်ပါခင်ဗျာ။
Mike Meyer's Comp TIA A+ 7th Edition (Video Tutorials ISO 676 MB)
http://www.filesonic.com/file/83252204/Mike Meyers CompTIA A+ 7th Edition.part1.rar
http://www.filesonic.com/file/83250804/Mike Meyers CompTIA A+ 7th Edition.part2.rar
http://www.filesonic.com/file/83252218/Mike Meyers CompTIA A+ 7th Edition.part3.rar
http://www.filesonic.com/file/83250692/Mike Meyers CompTIA A+ 7th Edition.part4.rar
http://www.filesonic.com/file/83250686/Mike Meyers CompTIA A+ 7th Edition.part5.rar
http://www.filesonic.com/file/83250724/Mike Meyers CompTIA A+ 7th Edition.part6.rar
http://www.filesonic.com/file/83252222/Mike Meyers CompTIA A+ 7th Edition.part7.rar
CompTIA A+ certification Exam Study Video Tutorials
eLeaning | 687 MB
မှတ်ချက်။ ။ကျွန်တော်ရှာလို့တွေ့တဲ့ လင့်တွေမှန်သမျှက ဒီနေရာက ပါခင်ဗျာ။ အဲဒီမှာ အဲဒါနဲ့ပက်သက်တာတွေ ထပ်ရှိပါသေးတယ်။ တကယ်လို့အသေးစိတ်သိလိုရင် သွားကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာ။ အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ။
ကိုစံငြိမ်း, ဝင်းအောင်, နေမင်းမောင်, aungphyo, bonge, KznT, tu tu, zo
22-03-2011, 04:25 AM
Last edited by လမ်းပြကြယ်; 22-03-2011 at 04:28 AM..
သန့်ဇင်ဌေး, နေမင်းမောင်, bagothar85, tu tu, zo
Originally Posted by sanwin89
အောက်ကလင်.လေးမှာ တွေ.မိပါတယ်ဗျာ။ဒေါင်းလို.လည်း ရပါသေးတယ်။
နေမင်းမောင်, aungkohtat, KznT, minthike, zo
educational ebooks, hardware ebooks, hardware guide, laptops ebooks, repairing ebooks
Hardware တွေပုံမှန်အလုပ် လုပ်ရဲ့လား ကိုဖြိုးငြိမ်း Hardware များဆိုင်ရာ 10 23-08-2010 03:40 PM